Yakatumirwa ne Tranquillus | Oct 10, 2018 | hofisi
Chiitiko cheGoogle kana MyActivity ndechokutsvaga mabasa ako paGoogle uye yese yese maGoogle-mapepa akaita seGoogle Map, YouTube, Google Calendar uye mamwe mabasa akawanda ane chokuita neiyo huru yewebhu.
Kubudirira kukuru kwebasa reGoogle kuve nenhoroondo yakazara yekutsvaga kwako kwose nemabasa ekuInternet pamasangano eGoogle, nzira yakanaka yekuwana tsvakurudzo yako, somuenzaniso, kana kuwana vhidhiyo ye YouTube yakatarisa pamberi.
Google inonyanya kusimbisa kuchengetedzwa kwekutsvaga. Sezvo basa reGoogle richiponesa basa rose paakaunti yako, unogona kukurumidza kuona kana mumwe munhu ari kushandisa Google Account yako kana kombiyuta yako pasina ruzivo rwako.
Chokwadi, kunyangwe panguva yekubira kana kuba chitupa, iwe unozogona kuratidza kubiridzira kushandiswa kweakaundi yako kuburikidza neGoogle Chiitiko. Inobatsira kana iwe uine chinzvimbo chakakosha chinogona kukanganiswa kana chikashandiswa nemunhu wechitatu; kunyanya padanho rehunyanzvi.
Ini ndinowana sei Google Chiitiko?
Pasina kuzviziva, iwe ungangove uchitova neGoogle Chiitiko! Chokwadi, iko kunyorera kunotangwa zvakananga kana iwe uine Google account (iyo iwe yaungadai wakagadzira semuenzaniso nekuvhura kero yeGmail kana account yeYouTube).
Kuti usvike ipapo, ingoenda kuGoogle, sarudza iyo "Yangu chiitiko" kunyorera nekudzvanya pane gridhi kumusoro kurudyi kwescreen. Iwe unogona zvakare kuenda ikoko zvakananga kuburikidza neiyi inotevera chinongedzo: https://myactivity.google.com/myactivity
Iwe uchange uine ruzivo rwehuwandu hwemashoko, nhoroondo yakadzama yemabasa ako, nhamba dzekupararira kwekushandisa kwezvirongwa zvakasiyana-siyana zvekambani uye zvimwe zvakawanda zvimwe kana zvisingakoshi zvakakosha. Kutsvaga kwakakurumidza uye kwakanaka, hauna chikonzero chokusaenda ikoko uye chengeta basa rako nguva dzose.
Ini ndinogadzirisa sei nhoroondo yangu yechiitiko?
Sezvo basa reGoogle rakabatana zvakananga kuGoogle Account uye kwete kumakombiyuta kana ma smartphone, haungakwanisi kuvhara nhoroondo yekutsvaga yekombiyuta yako kana kupinda muchivande chekuita kuti uise zvakare ruzivo rwekutsvaga kero yako.
Kana iwe uripo kupfuura imwe chete kushandisa iyo Google Account, iwe unogona kuchengeta munda wako wakavanzika nekuda kwezvikonzero zvako uye iwe unoda saka kugadzirisa kana kubvisa iyi shanduro inotarisa mabasa ako. Zvechokwadi, kushanda uku kunogona kusagadzikana, asi pane mhinduro.
Usavhunduke, Google inongokupa iwe kuti uende kuDashboard rekushandisa kuitira kuti ubvise rumwe ruzivo rwekufambisa mune mashoma mabhatani kana zvinyoronyoro kumisa chiitiko chekutarisa nekudzvanya pane "chiitiko kudzora" ipapo na kumaka chero chinhu chaunoda kuchengetedza "chakavanzika" kana iwe uri paInternet.
Saka, pasinei nokuti iwe wakanyatsopindwa muropa nechiitiko ichi kana iwe uchiona ichichimukira uye ngozi kuti uve nerudzi urwu rwechishandiso chinoshanda, kurumidza enda kuGoogle Chiitiko uye gadzirisa kuongororwa kweakaundi yako kune zvaunofarira!
VERENGA Iva Google search pro
Basa reGoogle, kana kuti sei kuziva zvose pamusoro pezviito zvako zvine chokuita neGoogle nemasangano ayo akasiyana-siyana. Kukadzi 24, 2022Tranquillus
pashureChenesa yako Facebook mbiri, unzwisise kukosha kwenzvimbo dzekudyidzana dzemufananidzo wako.
zvinoteveraTsvaga AccountKiller, we universal user guide iyo inokubatsira kubvisa recalcitrant maakaunti.